I-Catskills Blue House on Three Acre Site by Ashokan Reservoir - I-Airbnb
I-Catskills Blue House on Three Acre Site by Ashokan Reservoir
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Liv
Zitholele kabusha ingaphandle elikhulu ngesikhala esingaphandle saleli khabethe elihle elilungiswe kabusha. Hlala endaweni yokufunda ngezansi kwezitebhisi ezivulekile noma uthokomele eduze kwesitofu esibaswa yizinkuni. Noma umane ujabulele imibono yasemaphandleni kusukela ekamelweni lokulala noma endaweni yokudlela.
4.99 (izibuyekezo ezingu-109)
Hamba ngezinyawo, eqhweni, ukubhukuda, ibhayisikili, yenza i-yoga, nanoma yini efika engqondweni yakho— konke kungenzeka kumaCatskills. I-Ashokan reservoir bike/umzila wokuhamba ungamamayela ambalwa phansi komgwaqo. Enye indlela ekude kune-Marty's Mercantile yekhofi, isidlo sasemini, kanye nezinsiza eziyisisekelo.
Imizuzu engu-40 oyihamba ngemoto uma ukuminyana kwezimoto kungekho emgwaqeni
ULiv Ungumbungazi ovelele